“Ronaldo wey dhaawacdaa foorida jamaahiirta”. – Gool FM
Hector Bellerin oo u sheegay Arsenal go’aankiisa kaga aadan ku biirista kooxda Inter Milan
Man United oo dhageysaneysa dalabaadka u imaanaya sagaal ka mid ah xiddigaheeda safka koowaad & Xilliga ay go’aan ka gaareyso mustaqbalka Pogba oo la shaaciyay
Liverpool oo jidkii ugu dambeeyay u mareysa soo xero gelinta Saul Niguez… (Muxuu yahay qorshaha xiga?)
Barcelona oo diyaar u ah inay dhexda u gasho qorshaha ay Tottenham ku dooneyso saxiixa xiddig ay iska leedahay Juventus
Arsenal oo si lama filaan ah ugu dhaqaaqday saxiixa Lautaro Martinez… (Immisa ayay ku dooneysaa saxiixiisa?)
Kaalintee ayuu Raphael Varane kaga jiraa xiddigaha qiimaha ugu badan kaga tagay Real Madrid?
RASMI: Manchester United oo ku dhawaaqday in Real Madrid ay kala heshiisay saxiixa Raphael Varane
Waa kee xiddiga cusub ee codsaday inuu ka tago Real Madrid, kaddib Raphael Varane?
Kooxda PSG oo xaqiijisay muddada ay garoommada ka maqnaan doono Sergio Ramos
Goorta iyo Goobta lagu ciyaari doono kulanka lagu go’aanminayo kooxda ku guuleysanaysa horyaalka Somali Premier League ee MCC iyo Horseed oo la shaaciyey
“Ronaldo wey dhaawacdaa foorida jamaahiirta”.
Kaafi February 1, 2017
(Madrid) 01 Feb 2017. Cristiano Ronaldo dhaawac ayuu soo gaara marka ay jamaahiirta Santiago Bernabeu ay ku fooriyaan, sidaas waxaa yiri Keylor Navas.
Marka laga yimaado in uu ku baaqay midnimo iyo in la qadariyo dhaliyaha taariikhda Real Madrid ugu goolasha badan, xiddigaha afarta jeer hantay Ballon d’Orka waxaa lala beegsaday foori kulankiiay 3-0 uga badiyeen Real Sociedad.
Ronaldo waxaa dusha laga saaray bandhigyadii liitay ee Madrid iyada oo kulan badisay shantii ugu dambeeysay , waxa uu ku jeestay kuwa ku oorinayey kahor inta uusan foorida u badalin mashxarad kaddib markii uu sameeyey goolkii daah furka mida uu isaga dhaliyey.
“Waan sheegi kartaa in Cristano uu xaqiiqdii jecelyahay dhammaan jamaahiirta sida uuba sheegay Sergio Ramos,” ayuu ku yiri SER.
“Ma aha in uusan dan kalhayn marka ay ku oorinayaan. Wey dhaawacdaa markaay ku fooriyaan iyo marka ay u mashxaradaan laakiin wuuogyahay in jamaahiirta na garab taagan yihiin. Mar walba waxa uu isku dayaa in uu na caawiyo isaga oo dhalinaya goolasha.
“Waxyaabahan wey dhacaan. Ciyaaryahan cusub ayaan ahaa lamina yaabin.
“Marka jamaahiirta iyo ciyaaryahanada mideysan yihiin, kooxda mar walba wey xoogan tahay, marka jamaahiirta ay na garab taagan yihiin, sare ayey noo qaada waana midda aan dooneyno.”
Kooxdee Website-keeda loogu booqasho badnaa 2016?
Real Madrid oo dib u heli karta adeega Carvajal iyo Marcelo kulanka…